विवाहेत्तर सम्बन्धको पाँच रुप - Sajhamanch
२०७८, साउन १८ गते बिहानिको ०४:२२:१० बजे Sunday 1st August 2021
विवाहेत्तर सम्बन्धको पाँच रुप
February 14, 2021 7:04 pm
जब प्रेमको कुरा आउँछ तब हाम्रो तीन मस्तिष्क प्रणाली सक्रिय हुन्छ ।
१. यौनको इच्छा
२. रोमान्टिक प्रेम
३. साथीप्रति लगाव
मस्तिष्क संरचना यस किसिमले काम गर्छ कि एक साथीका साथ जोडिएपछि, हामी गहन प्रेम र यौनको चाहाना महसुष गर्न सक्छौं । अलग–अलग व्यक्तिले विवाहेत्तर सम्बन्धकाको भिन्न भिन्नै व्यवहार गर्छन् ।
बिवाह गरेर पार्टनर बनाइसकेपछि पनि किन अरुसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् ? यसका अनेक कारण हुन्छन् । कोहि केवल यौन सम्बन्धाका लागि दोस्रोसँग नजिकिन्छन् भने कोहि भावनात्मक हिसाबले मात्र ।
यो सबै प्रकारको मामलामा सबैभन्दा आम हो । यस्तोमा दुबै केवल यौन चाहाना पुरा गर्नका लागि एक अर्कालाई चाहन्छन् । यसले उनीहरु यौन सन्तुष्टि लिन सक्छन् । हुन त उसले आफ्नो पार्टनरलाई छाड्न चाहँदैनन् । तर, अर्कासँग मस्ती गर्न पनि छाड्दैनन् । यस्तो सम्बन्ध अक्सर उत्तेजना भएसँगै समाप्त हुन्छ । लामो समयसम्म टिक्दैन ।
उनीहरुबीच शारीरिक सम्बन्ध नहुन सक्छ । तर, भावनात्मक रुपमा एकअर्कालाई रुचाउन सक्छन् । उनीहरु एकअर्काको बारेमा बढी सोच्छन् । यस्तो कुरा बाहिरी रुपमा प्रकट नहुन पनि सक्छ । तर, भित्रभित्रै उनीहरु नजिकिन्छन् । आफ्ना सबै कुरा खुलेर भन्छन् । मनको वह पोख्छन् । उनीहरु निरन्तर एकअर्कामाथि पहुँच बनाइराख्छन् । किनभने उनीहरु एकअर्कासँग जोडिइरने आवश्यक्ता महसुष गर्छन् ।
असन्तोष एवं बदलाको भाव
आफ्ना पार्टनरसँग जब असन्तोष बढ्छ, बदलाको भाव पैदा हुन्छ, उसले अर्कोसँग सम्बन्ध स्थापित गर्छ । आफ्नो सम्बन्ध उदासिन भएपछि स्वतः उनीहरुले अर्को पार्टनरको आवश्यक्ता महसुष गर्छन् । पार्टनर चित्त नबुझ्दा, पार्टनरको व्यवहार मन नपर्दा, पार्टनरप्रति घृणा पैदा हुँदा उसले अर्कोलाई आफ्नो साथी बनाउन सक्छन् । आफ्नो सम्बन्धमा जब कुनै न कुनै समस्या हुन्छ, उसले अर्को सम्बन्ध बनाउन खोज्छ ।
कतिपय कुरा खुलेर भन्न सकिदैन । खुलेर गर्न सकिदैन । मनमनै कसैलाई मन पराइन्छ र उसैसँग रमाइला पलहरु विताएको कल्पनामा रमाइन्छ । जबकी घरमा आफ्नो पार्टनर छँदैछ । तर, पार्टनर भन्दा पनि अर्को व्यक्तिको कल्पनामा डुबिन्छ । यस्तो कुरा बाहिर त आउँदैन । यद्यपी त्यसले सम्बन्धमा केहि तीतोपन भने ल्याउँछ ।
शरीर र आत्मा
जब बिवाहित व्यक्ति अर्कोसँग शारीरिक र मानसिक रुपले जोडिन्छ भने त्यो निकै घातक हुन्छ । दुबै यौन सम्बन्ध राख्छन् । साथै भावनात्मक रुपले पनि एकाकार हुन्छन् । यस्तो सम्बन्ध विस्तारै सतहमा देखिन थाल्छ । त्यसले दाम्पत्य सम्बन्धलाई विगार्न सक्छ । किनभने उनीहरु एकअर्का बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्छन् ।
February 14, 2021 7:04 pm | रोचक कुरा / टिप्स
झापामा साउन २० र २१ गते जानसेन खोप लगाइने
एमालेको विधान अधिवेशन भदौ २७ बाट, असोजमा पालिकास्तरको अधिवेशन गरिने
शिवसताक्षीका खोपकेन्द्रमा अत्यधिक भीड, कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँन जाँदा संक्रमित हुने जोखिम बढ्यो
बिर्तामोडका निजी शैक्षिक संस्थाका जनशक्ति कोरोना विरुद्धको खोपबाट बञ्चित ! अपमान भएको भन्दै कोटा अस्वीकार गर्ने प्याब्सन र एन–प्याब्सनको निर्णय
यथाशीघ्र खोप उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्याब्सन/एनप्याब्सन बिर्तामोडको विज्ञप्ति
इपिएस परीक्षा पास गरेकालाई तत्काल कोरिया पठाउन निर्देशन
वीर अस्पतालभित्र स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीबीच झडप